#सफलता सुत्र १ (Success Formula 1) » RAM B SHAM
April 27, 2020 RAM B SHAM Article
यो भन्दा धेरै ब्याख्या र उदाहरण पनि किन दिऔँ र ! बुझ्‍नेले यत्ति भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ । के तपाईको क्षमता र प्यासन पहिचान भएको छ ? के तपाईको छोरा र छोरीको क्षमता र प्यासन पत्ता पहिचान गर्नुभयो त ? के तपाईको परिवारको सबै सदस्यको पहिचान भयो त ? छ भने बधाई छ, छैन भने अब गर्नुहोस् । आफै पहिचान गर्न सक्नुहुन्न भने म सहयोग गरिहाल्छु नी । आउनुहोस् आफूभित्रको वास्तविक क्षमता र प्यासन पहिचान गरी त्यही प्रकारको Goal Setting गरी महान सपना निमार्ण गरौँ र सफलताको आधारशिला तयार पारौँ ।
वास्तविक क्षमता, प्यासन पहिचान र Goal Setting गरी महान सपना निमार्ण गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
यो संसार गर्नेहरुको हो, जसले गर्छ उही मात्र सफल ठहर्छ
Previous Post:शिक्षक गुरु की गोरु ?